သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): သူကြီးမင်းရဲ့ မြွေပုံပြင်
ဟားဟားဟား... ရယ်လိုက်ရတာ.. အဲဒီ ဦးပဇင်းနဲ့ မြွေကို.. မြင်ယောင်အောင် ရေးတတ်ပါ့..း))
Friday, 26 August 2011 at 05:35:00 BST
အင်း သကြီးမင်း ရေ ဖြစ်စဉ်လေးက တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ် များများေ၇းပါ သကြီးမင်းရဲ့
Friday, 26 August 2011 at 05:47:00 BST
Friday, 26 August 2011 at 05:59:00 BST
Friday, 26 August 2011 at 07:02:00 BST
ကိုကိုမောင်ကတော့ အဲဒါ မပါရင် မပြီးဘူး။ ကျန်တာတွေ လိုခြင်တောင် မြွေပေါ်ထိုင်ပြီတော့ မပါရဲဘူး။ ကြောက်စရာကြီ။
Friday, 26 August 2011 at 08:21:00 BST
အင်းလေ... သူဂျီးမင်းလဲ မိန်းမရပြီး အဲလို ဘိုထိုင်ကွဲတာ နဲ့ကြုံရင် သူဂျီး ကတော်ကပဲ အမှုဖွင့်မှာပါလေ.... ဟုတ်တယ်ဟုတ်....ဟီးဟီး။
Friday, 26 August 2011 at 08:49:00 BST
Friday, 26 August 2011 at 09:41:00 BST
တကယ်တော့ ဆွမ်းမစားခင် ဖတ်လိုက်ရမှာ။ ခုတော့ဖြင့် မစားခင်လေး ဖတ်လိုက်မိတော့။
မြွေဆိုလို့ မြွေမြင်မက်ရင် လာဘ်ဝင်တတ်တာ တကယ်ပါ။ ကိုယ်တွေ့ဗျို့။ (တိုက်ဆိုင်လို့လားတော့ မသိဘူး)
အရေးအသားရှင်းတယ်။ ဖတ်ရတာ တစ်ချက်ကလေးမှ ခလုတ်မတိုက်ဘူး။
Friday, 26 August 2011 at 10:03:00 BST
ငယ်တုန်းကတော့ မြွေများ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေလား
Friday, 26 August 2011 at 11:49:00 BST
တစ်ပုဒ်ဆိုတစ်ပုဒ် မှတ်သားလောက်ပါပေတယ် ကိုကိုမောင်ရေ။ တစ်ခါမှ မြွေကို အိပ်မက် မမက်ဖူးသေးဘူးး)လဒ်ကောင်ဆိုပေမယ့်ကြောက်ပါ့။
'သူခိုးသွားမှထိုးကွင်းထ' ဆိုတဲ့စကားပုံတောင်ရှိနေမှ မျက်နှာချင်းဆိုင် ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာတော့ အကြောက်ကိုယ်စီနဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်း)
လူ့သဘောသဘာဝအရ အဖွဲ့နဲ့မှမာန်လေးတက်ပြီး သတ္တိရှိလာတာမဟုတ်လား။
Friday, 26 August 2011 at 14:09:00 BST
ရယ်လိုက်ရတာ...။ ထူးဆန်းပါပေ့ တုံးဖလားသဂျီးရယ်...:)
Friday, 26 August 2011 at 14:58:00 BST
မြွေနဲ့တော့ အိမ်မက်ထဲမှာပဲ တိုးရင် လုံလောက်ပါပြီ။
အပြင်မှာတော့ မတွေ့ချင်ဘူး။ အသဲယားတယ်။
Friday, 26 August 2011 at 15:02:00 BST
အံမယ် ဒီတစ်ခါတော့သူကြီး ကြောင်မဖမ်းတော့ဘူးပဲ...ပုံပြင်ထဲက ဦးဇင်း ဘိုထိုင်အိမ်သာနဲ့ ပြဿနာဖြစ်နေတာကို ဖတ်ရင်းက ဦးဟန်ကြည်လည်း အိမ်မှာ ဘိုထိုင်တပ်ကာစတုန်းက ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ရတာ ပြန်သတိရမ်ိသေးတော့တယ်...ဘယ်လောက်ပဲ ပါတော်မူချင်လို့ ပြေးတက်တက် အဲဒီအပေါ်ရောက်ရင် အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးဗျို့...တစ်ပတ်လောက်ကြာမှ အသားကျလာတယ်...ဒါတောင် မကျေနပ် အားမရလို့ တစ်ဝက်ကို ဘိုထိုင်မှာ ရှင်းပြီး ကျန်တဲ့တစ်ဝက်ကို ရိုးရိုးအိမ်သာမှာ ထပ်ရှင်းရသေးတယ်...ဒါပေမယ့် ကမုတ်ပေါ်မှာတော့ ခြေတော်ရာ မကျန်ရစ်တာမို့ ဦးဇင်းထက်တော့ သာပါသေးရဲ့လို့ ဖြေမိပါတယ်...မတော်လို့များ အိမ်သာလဲသွားလို့ကတော့ အင်း...သူကြီးတွေးပြမှပဲ ခေါင်းကြီးသွားတယ်...
Friday, 26 August 2011 at 15:33:00 BST
ဘဲထီးဂွတ် ဘဲမဂွတ် ..ဂွတ် ဂွတ် ဂွတ်
Friday, 26 August 2011 at 18:26:00 BST
ရေးလည်းရေး တွေးလဲတွေးတက်ပအကိုရာ :):)
မြွေတော့ ကြောက်လယ် အကို ...:P:P
Friday, 26 August 2011 at 19:08:00 BST
မြွေကို ငွေလို့ ယူဆတာတော့ ကျွန်မတို့အရပ်နဲ့ တူပြန်တယ်
သူဂျီးမင်းရဲ့ မြွှေပုံပြင်တွေကလည်း ထူးဆန်းထွေလာပါလားနော်။
သူဂျီမင်းက မြွေတွေကို အထူးပြုလေ့လာနေလေသလားး)
Saturday, 27 August 2011 at 07:08:00 BST
ဟိုနေ့ကပဲ မြွေအကြောင်း အိပ်မက် မက်တယ်ဗျ။
မြွေက ဘယ်လောက် ကြီးလဲ ဆိုရင် သူ့ရဲ့ လျှာကတင် ဖျာနှစ်ချပ်စာလောက်ကို ကျယ်တယ်။ ကျနော်တို့ မိသားစု နောက်ကို လိုက်လိုက်တာဗျာ။ ပြေးရတာ ဝရုန်းသုန်းကားပဲ။ နောက်ဆုံး ပြေးမလွတ်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ အားလုံး ကိုယ်စား ငါပဲ အနစ်နာခံမယ် ဆိုပြီးတော့ ဘယ်က ရလာတဲ့ ဗုံးနဲ့လည်း မသိပါဘူး။ မြွေပါးစပ် ဟနေတုန်း ပစ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ မြွေရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ ဗုံးကို ထောင်ခဲ့ပြီးတော့ ကျနော်ကတော့ ဗိုက်ထဲကို လှိမ့်ဆင်းသွားလိုက်တယ်။ မြွေရဲ့ ဗိုက်ထဲက အက်ဆစ်တွေက ခန္ဓာကိုယ်က စားလိုက်တာ ပြောမနေပါနဲ့တော့။ ခဏကြာတော့ ဗုံးပေါက်ပြီးတော့ မြွေလည်း ခေါင်းပြတ်သွားတယ်။ ဒီတော့မှ ကျနော့်လည်း ပြန်ထွက်လာနိုင်တယ်။ အပြင်လည်း ရောက်ရော လူတွေ အားလုံးက ဝိုင်ြး့ပီးတော့ ချီးကျူးထောပနာ ပြုကြတယ် လို့ အိပ်မက် မက်တယ်။
ဘာလဲတော့ မသိဘူး။ အဓိပ္ပါယ်လည်း မကောက်တတ်ပါဘူး။ အစွဲလည်း မရှိဘူး။ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ အခု ပို့စ်လေး ဖတ်ပြီး ပြန်သတိရလို့. . . .
Sunday, 28 August 2011 at 00:02:00 BST
တွေးကြည့်တာနဲ့တင် ဗိုက်ထဲမှာ ကလိကလိနဲ့...
မြွေဆို အသေကြောက်တဲ့အပြင် အဲဒီ တွန့်လိမ်
တွန့်လိမ်ကို မြင်ရတာ ဘာနဲ့မတူတဲ့ အသည်း
ps: သူကြီးရဲ့ မြွေပုံ ခေါင်းက ရေနဂါးခေါင်း ဖြစ်နေတယ် :D
Sunday, 28 August 2011 at 08:09:00 BST
ရေးလည်း ရေးတတ်ပါပေ့ သူကြီးမင်းရယ်...ရယ်လိုက်ရတာ...ဖတ်ဖတ်မော...းD
Sunday, 28 August 2011 at 17:21:00 BST
Monday, 29 August 2011 at 05:45:00 BST
ပုံပြင် ၁၀ ပုဒ်လောက် ပြောသွားသလိုပဲ နော် .. :D
Tuesday, 30 August 2011 at 09:45:00 BST
သူကြီးမင်းပြောတာကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ မြွေကို မသတ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းနေတာ နောက်ဆုံးမြွေကို မသတ်တော့မှ စိတ်အေးသွားတယ်..
Thursday, 1 September 2011 at 00:39:00 BST
Wednesday,7September 2011 at 16:03:00 BST
Hiya! My name is Regan and I personally just desired to say your weblog is great!
haveasite that virtually had an identical web address: http://www.
blogger.com/comment.g?blogID=7609397484304819032&postID=7975786404424984960 mine was onlyafew letters different.
Anyways, I'mabig admirer of your blog site and if you at any time wantaguest write-up you should email me at: regandejesus@yahoo.de. I absolutely love writing!
Feel free to visit my weblog: youtube